प्रवास Archives - Kavyalaya - काव्यालय
एउटा परिवारका तीन सदस्यको अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डको १५ दिने भ्रमणपछि तेस्रो यात्रा थियो हवाई नामक स्टेट । अझ विशेषत: हवाईको पनि ‘हनोलुलु’ शहर केन्द्रमा थियो । त्यो परिवारको एक सदस्य म नै हुँ । त्यसैले, लेखमा कतै म हुनसक्छु । म नहुन पनि सक्छु किनकी मेरो स्थान हामीले लिन सक्छ । स्पष्ट छ त्यसपल म भन्ने शब्द पूरै हामीमा गएर गाभिन्छ ।
तीनदिने ट्रीप । खासमा न्यूजील्याण्ड घुम्ने बिस दिनको समय काटेर तिनदिनका लागि हनोलुलु, हवाई स्टेट घुम्न निस्किएका जो थियौँ । यसलाई ट्रान्जीटको यात्रा भन्न पनि सकिँदैन किनकि त्यो मल्टीसिटीको टिकट जसमा हवाईको एयर्पोटबाट बाहिर चिहाएर भित्र पसी हाल्नुपर्ने अवस्था पनि थिएन ।
त्यसैले, यहाँ तीनदिनको ट्रीपको कुरा छ । तीन दिन ? अर्थात् बहत्तर घण्टा । त्यसलाई चार हजार तीनसय बीस मिनेट भने पनि हुन्छ । यात्रामा निस्किएको मान्छेका लागि चार हजार तीनसय बीस मिनेट कम समय भने पक्कै हैन ।
एयरपोर्टबाट होटल पुग्दा भर्खर बिहानको दश बजेको थियो । नुहाएर हलुका भएपछि श्रीमती गंगाले भनिन्, “आजको दिन ‘हनाउमा बे’ बाट सुरुवात गरौँ । माथि प्रस्तुत तीन सदस्यमध्ये श्रीमती गंगा दोस्रो हुन् । गुगलमा मैले ब्राउज गरेँ- नीलो देखिने बेको पानी, सुन्दर ‘बीच’ रहेछ ।
मैले हवाईयन भाषामा ‘आलोहा’ आकारमा पोज दिएँ, छोरी र श्रीमतीले आफ्नै तरीकाले क्यामरामा हेरे । ‘आलोहा’ बुढी र कान्छी औंला ठाडो पारी रहल औंला सुताउनु यसको प्रतिकात्मक चिह्न हुन्छ । आलोहा यस शब्दको अर्थ अंग्रेजीमा ‘हेल्लो’ नेपालीमा भनीने नमस्कार जस्तै हुन्छ । फोटो क्लिक ! क्लिक !! पहिलो दिनको थकाइ- हनाउमा बेको भ्रमण र इण्डियन रेस्टुरेण्टको खानाले साँझ उडायो ।
जनवरीको अन्त्यतिर मैसम पैसठ्ठी डिग्री फरेन हाईट, श्रीमती गंगाकै फर्माइसमा परिवारका तीनैजना सदस्य ‘हनोलुलु जु’ पुग्यौँ। यो ट्रीपको घटना पनि दोस्रो दिनको विवरण हो । उक्त जु पुग्नु हाम्रा लागि थियो । हामी पुग्यौँ तर अरुहरूका लागि ? आधुनिकताले आफू पुगेर मात्र काफी छैन, अरुका लागि पनि पुग्नु आवश्यक हुँदै लगेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा यात्रामा बसेको, घुमेको, खाएको आदि कुराको प्रमाण चाहिन्छ । त्यसपछि मात्र दुनियाँले विश्वास गर्छ । त्यसैले ‘हनोलुलु जु’ अघि उभिएर फोटो खिच्यौँ । सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्नुअघि त्यसलाई श्रीमतीले हेरिन् । फोटो त एन्टिलाईट परेकाले कालो आएछ । कालो भए पनि मेरा लागि चाहिँ पुग्यौँ भन्ने प्रमाण थियो । उनको चित्त नबुझेपछि दोस्रो फोटो जुबाट थोरै वर लिने तयारी हुन लाग्यो ।
यसैबीच छोरी भोकाएको संकेत बुझियो । प्रिय पाठक, परिवारको तेस्रो सदस्य छोरी सेजल हुन् । यसरी तीन सदस्य एउटा क्यामराको तस्बिरमा कैद भयौँ । त्यहाँ म मात्र थिइनँ किनकि त्यहाँ हामी थियौँ । याद गर्नु भयो, यो फोटो सेसनले हामीले एक वचनको शब्द ‘म’लाई पुरिदिएको अवस्था छ ।
फोटो खिच्न ‘हनोलुलु जु’को अघिल्तिर बीच रहेछ । हनोलुलुमा बीच जता फर्किए पनि देखिन्थ्यो । केही उज्यालो ठाउँ तीनै सदस्य जुको गेटमा पुगेर टिकट नकाटी बाहिरबाटै हिँड्यौँ । ‘अहो ! गान्धी रहेछन् !’, मैले भनेँ । बैजनी रंगको माला लगाएर गान्धी ठिङ्ग उभिइरहेका थिए । यहीँ, एउटा फोटो खिच्यौँ । श्रीमती गंगा र मैले सेजललाई बोकेर पालै पालो ‘डोयट’ फोटो खिच्यौँ ।
छेउबाट हिँड्ने दुईजना टुरिस्टमध्ये स्त्री चाहिँले सोधिन्- ‘तीनै जनासँगै फोटो खिच्ने हो ?’ ‘हजुर, खिचिदिनुहोस् न’ भन्दै श्रीमती गंगाले क्यामरा उनको हातमा दिइन् । त्यसपछि मैले छोरी सेजल उनलाई दिएँ । तीनैजना गान्धीको पाउ छेउ दाँया बाँया उभियौँ ।
‘धन्यवाद’, मैले ती टुरिस्टलाई मुस्कान दिएँ । जसले तीन सदस्यको एउटा परिवारलाई क्यामरामा एकसाथ उतार्न सहयोग गरे । श्रीमती गंगा, नानीलाई फर्मुला बनाएर भुल्याउन लागिन् । त्यो समयको फोटो हेर्दा आज पनि सम्झन्छु ‘गान्धी जी र तीन सदस्य !’
हवाईमा किन गान्धीजी ? मेरो मस्तिष्कमा प्रश्न तरंगित हुन थाल्यो । केही थप सिंगल तस्बिर लिएर जु भित्र पस्ने इच्छा श्रीमती गंगाको थियो । छोरी सेजलले पनि फर्की फर्की गान्धीजीलाई हेरिन् । उनको हातको लठ्ठी तान्न खोजिन् । दश महिनाकी बालिका, त्यो उनको स्वभाव उमेर अनुसारकै थियो ।
म टिकट लिन काउन्टरतिर लागेँ । उनीहरू मेरो पछि उभिएका छन् । मलाई त्यो टिकट लिँदा कति डलर खर्च भयो ठ्याक्कै याद छैन। माफ गर्नु होला, डलरको याद नहुँदा त्यसलाई रुपियाँमा अनुवाद गर्न पनि सक्ने कुरा भएन ।
जे होस्, हनोलुलु जुभित्र हात्ती, बाघ, भालु, बाँदर, चरा र अन्य प्रजातिका पंक्षी छन् भन्ने साईन बोर्डमा देखाइएको थियो । हामीले त्यहाँ साइन बोर्डमा टालिएको अनुसार रेप्टाईल्स, बर्ड्स् र म्यामल्स हेर्यौँ । यहाँले यसपल्ट याद गर्नु भयो होला, फेरि हामी शब्दले मलाई उछिट्ट्याइदिएको छ ।
सानो पानीको पोखरी बीचमा साना तन्नेरी कछुवा पौडिरेहका र बुढा ठूल-ठूला कछुवा छेउमा घाम तापिरहेका थिए । म तिनको तस्बिर लिन व्यस्त रहेँ । तिनलाई आफ्नो क्यामरामा उठाउने मेरो ध्यान थियो । प्रिय पाठक, यसपल्ट यहाँले याद गर्नुभयो फेरि ‘हामी’लाई पछाडि छाडेर जित्दै ‘म’ पात्र अघि आयो ।
क्यामरा पर्सन मेरो नजिकमा उभिएर श्रीमती गंगापनि छोरी सेजललाई ती जीव देखाउन व्यस्त रहिन् । सेजल बडो अनौठो मानेर ती जीव हेर्न लागिन् । त्यसकै अर्कापट्टि अग्ला सेतो रंगका बकुल्ला एउटा खुट्टा उचालेर ध्यान मुद्रामा देखिन्थे । अन्य रंगीन चरा र जनावरहरू जसको नाम याद राख्न मुस्किल पर्थ्यो, ती पनि हेर्यौँ । कतै मुजुर, कतै तुन्द्रुङ्ग झुण्डिएका चिम्पाञ्जी थिए ।
त्यसपछि हामी तीनैजना सदस्य भित्तामा टाँसिएको दुई एशियन हात्तीको ठूलो आकारको फोटो हेर्दै त्यतातिर गयौँ । हामी मान्छे पनि एशियन फेरि तस्बिरमै एशियन हात्ती लेखिएको थियो । श्रीमती गंगालाई त्यो हात्ती हेर्ने उत्सुकता जाग्यो ।
साइन बोर्ड पछ्याउँदै पछ्याउँदै हात्तीको बासस्थान पुग्यौँ । एउटा बन्देज गरिएको ठूलो पर्खाल थियो । त्यसकै वरपर श्रीमती गंगा र म हात्ती खोज्न तल्लीन रह्यौँ । पर्खालभित्र हात्तीले कुल्चिएको हिलो माटो र त्यसको गन्ध आलै थियो । त्यहाँ पानीको आहाल पनि देखियो तर हात्ती भने कतै देखिएन ।
मैले यस्तै, बाह्र वर्षको उमेरमै भारतको बंगाल राज्यमा हात्ती देखेको थिएँ । मैले यस्तै शब्दको प्रयोग गरेँ किनकी ठ्याक्कै बाह्र या तेह्र हो उहिले त्यो याद हुन सकेन । हात्तीको दृश्य देख्न नपाउनुमा मलाई कुनै दु:ख मनाउ थिएन । भ्रमणमा निस्किएकी दोस्रो सदस्य श्रीमती गंगा भने केही दुखी भइन् । बोर्डमा हात्ती देखाइयो तर भित्र छैन । उनी सही थिइन् ‘टिकट काटेपछि जु भित्रका सबै जनावर र पशु-पंक्षी हेर्न खोज्नु ग्राहहको चाहना हो । हेर्न पाउनु ग्राहकको अधिकार हो ।’ यसबीच स्ट्रोलरमा कैद छोरी सेजल त्यहाँको तातो हावा र गर्मीका कारण थकाइले निदाइसकेकी थिइन् ।
त्यस दिन हामीले हात्ती त देख्न पाएनौँ । तस्बिरमा टाँसिएका हात्तीको विवरण भने पढ्न थाल्यौँ । ती हात्ती इण्डियाबाट ल्याइएका रहेछन् । त्यसैले त साइन बोर्डमा एशियन हात्ती लेखिएको रहेछ । त्यसपछि बाँयातिर रहेका रङ्गीन फूलहरूसँग फोटो खिच्ने इच्छ श्रीमती गंगाको थियो । म कहिले श्रीमान बन्थेँ त कहिले क्यामरा पर्सन । त्यसदिन मेरो उनका लागि डबल रोल थियो । फूलको मात्र सिङ्गल फोटो खिचेर उनीतिर फर्की “रेडी?” म बीचबीचमा सोध्थेँ । यसरी म दुई फूलको एकैसाथ फोटो खिच्दै थिएँ।
क्लिक! क्लिक! गर्मीले निधार पुछ्दै दुई सदस्यको थकाइ मार्ने योजना बन्यो । त्यहाँ छेवैको बेन्चमा बसेर ‘हनोलुलुमा किन गान्धी?’ म चाहिँ फोनमा रिसर्च गर्न थालेँ । उनी भने नानीलाई स्ट्रोलरमा सहज तरिकाले सुत्ने व्यवस्था मिलाउन थालिन् ।
इण्डियाका हात्ती अनि हनोलुलु जुका अघि गान्धीको सालिक! म केही त अवश्य छ भन्ने सम्भावना खोतल्न थालेँ । आखिर मान्छे हिँड्ने भनेकै सम्भावना बोकेर त हो । एउटा आर्टीकल भेटाएँ जसमा लेखिएको थियो ‘स्टेपीन सि लोवे’ले सन १९९० मा गान्धीजीको सालिक निर्माण गरेका थिए । गान्धीलाई एक शान्तिप्रेमी मानिसका रूपमा परिचित भएका र यो क्षेत्र शान्तिको लागि परिचित छ- भनेर राखिएको हो- भन्ने भाव बोकेको लेख थियो त्यो।
त्यसपछिको हाम्रो यात्रा ‘डाईमण्ड हेड स्टेट पार्क’को थियो । तीन सदस्य दोस्रो दिनको दोस्रो यात्रातिर लाग्यौँ ।
डाईमन हेडमा घुमेर थकान भएर साँझ होटल फर्किएपछि श्रीमती गंगाले भनिन्, ‘त्यो फोन मलाई दिनु त ! हामी हनोलुलु जु र डाईमण्ड हेड पुग्यौँ । हामी पुगेको अरु मान्छेले नदेखेसम्म थाहा पाउँदैनन् ।” म मुसुक्क हाँसे। श्रीमती गंगा ठीक भनिरहेकी थिइन् । यो आम मान्छेको स्वभाव नै हो ।
प्रिय पाठक, म श्रीमती गंगाको ‘हामी’ भित्रै गायब भएँ । यहाँ पनि एकपल्ट गम्भिर भएर सोच्नु होस्, आजको आधुनिक दिनमा कसैले तस्बिर या भिडीयोमा नदेखेसम्म गफकै भरमा म त्यहाँ पुगेँ, घुमेर आएँ भन्दा पत्याउने अवस्था छ ? कसले विश्वास गर्छ ? अरुका लागि भएपनि श्रीमती गंगाले सामाजिक संजालमा तस्बिर हालेर हवाई स्टेटको हनोलुलु भन्ने ठाउँ पुग्यौँ भन्ने सन्देश पेश गरिन् । जसमा तीन सदस्य गान्धीजीको छेउमा उभिएको तस्बिर विशेष थियो । तस्बिर अर्थात् घुम्न गएको प्रमाण पेश गरिसकेपछि लाग्यो, मानिस सामाजिक प्राणी हो। मानिस आफ्नो दुःख मात्र होइन खुशीको क्षणपनि आफ्नो समाजसँग बाँड्न चाहन्छ । फोटो र भिडियो हालेर श्रीमती गंगा सामाजिक प्राणी भइन् । मैले पनि सामाजिक प्राणी हुनकै लागि/कारण यति विवरण उतारेँ ।
बिहान छोरी सेजलले तान्न खोजेकी गान्धीको लौरोलाई हेर्दै मैले सोचेँ, ‘गान्धीले लौरो छोडेनन्। लेखकले कलम छोडेन।’
१९ पुस २०७७0comment
by basupushpaadk १८ अशोज २०७७
गजल एक जिन्दगानी लुकाउन बसेरा खोज्नु छ यो शहरमा फेरि नयाँ डेरा खोज्नु छ ब्याधा आएर आमालाई गुँडबाटै लग्यो कहाँ गए होलान् कठै! बचेरा खोज्नु छ ए! बादलहरू, कहाँ हुन्छ…
शरद पोख्रेलका कविता
by sharadpokhrel ११ अशोज २०७७
भित्ताका कानहरू हुँदैनन् निर्धक्क सुनाउनु भए धन्य हुने थियौँ महाराज देश खाने कथा निक्कै भाव भङ्गिमा वाचन गर्नुभए अनुगृहीत हुने थियौँ जुग जाने कविता हाउभाउमा दुरुस्तै उतारी दिनुभए अनुकम्पित हुने…
by azeet ४ अशोज २०७७
ओय अर्फेन ऊ यसरी हुर्किँदैछ घरमाथिको ठूलो चिलाउनेको रूखमा तामे ढुकुरको गुँड हेरेर जहाँ क्षण क्षणमा आमाले चारो खिलाउँछिन् बचेराहरूलाई मायाले नाङ्गा शरीरमा बचेराको आफ्नो छातीको न्यानो प्वाँखले ढाक्छिन् बेला…
मेराे प्रश्न तिमीलाई?
by sharadadhital २१ भदौ २०७७
मेराे प्रश्न तिमीलाई? पसलमा सजाईएकी -गुडिया ग्राहककाे मन तान्ने -आकर्षण नसम्झ मलाई म वस्तु हाेइन । कति किन्छाै ए मालिकहरू ! कति खरिद्छाै ? वारि र पारिसिमा किन चाहन्छाै –…
अतुल दु:खीका गजलहरू
by atuldukhi ९ भदौ २०७७
गजल १ हृदयमा मेरो कहिल्यै ननिभ्ने आशाको दियो छ परिस्थिति भयावह भए पनि आत्मबल बलियो छ आऊ प्रिया सौहार्दपूर्ण ढंगले सुमधुर खेल खेलौँ मसँग मनोहर डण्डी छ तिमीसँग सुरम्य बियो…